सेमीफर्मले HTML कागजातहरूबाट पाठहरू निकाल्न ठूलो उपकरण परिभाषित गर्छ
एक एचटीएमएल कागजातमा पाठ एक विशिष्ट प्रकार को फरक छ HTML ट्याग ( ,,)। त्यहाँ विभिन्न व्यापक र शक्तिशाली कार्यक्रमहरू छन् जुन सबै प्रकारका डेटा फ्याट गर्न मद्दत गर्न सक्दछ, जसमा पाठहरू, चित्रहरू र लिङ्कहरू समावेश छन्। यसबाहेक, कुनै निकालेएको डाटालाई संरचित र प्रयोगकर्ता-अनुकूल ढाँचामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। यसबाहेक, तपाईंलाई कुनै पनि कोडहरू सिक्न आवश्यक छैन, किनकि यी उपकरणहरू कुनै कोडिङ कौशल वा अनुभवको साथ राम्रोको लागि राम्रो हो।
1. आयात .io:
Import.io म्याजिक मोडमा काम गर्न सक्ने सबैभन्दा राम्रो, सबैभन्दा लोकप्रिय र उपयोगी उपकरणहरू मध्ये एक हो। यसको प्रयोगकर्ता-अनुकूल इंटरफेसको कारण यो उपकरण धेरै लोकप्रिय छ। Import.io को प्रयोग गरेर, तपाईं URL लाई इंगित गर्न सक्नुहुन्छ, र यो प्रोग्राम टुक्रा हुनेछ र तपाईंको जानकारी जानकारी पाउँनेछ। यो सामग्री तालिकाको रूपमा प्रस्तुत गर्दछ र विभिन्न पूर्व-लोड विकल्पहरूसँग आउँछ। डाटा JSON को रूपमा डाउनलोड गर्न सकिन्छ वा तपाईंको हार्ड डिस्कमा सुरक्षित गर्न सकिन्छ।
अक्टोपारेले सबै प्रकारको डेटा निकाल्छ, यसलाई संरचित रूपमा व्यवस्थित गर्दछ र तपाईंलाई असंगत र संरचित डाटा बीच फरक पार्छ। तपाइँले कार्यक्रमलाई के गर्न र कसरी गहिराई र चौडाईमा डेटा निकाल्नको लागि मात्र भन्न आवश्यक छ। यसले पाठ डेटा बनाउँछ जुन स्ट्रिंगमा बनाइएको छ। यो कार्यक्रमले पाठ फाइलहरू, भिडियोहरू, अडियो क्लिपहरू र छविहरू समर्थन गर्दैन।
युपिथसँग, फारम भरेर, नेभिगेसन र क्लिक बटनहरू स्वचालित रूपमा सजिलो हुन्छ। यो एक प्रभावशाली, छिटो, सरल र लचीला वेब एक्सकन्टर हो जसले HTML कागजातहरूबाट उपयोगी जानकारी मद्दत गर्दछ। HTML, JSON र Silverlight को रूपमा डेटा बचत गर्न सक्नुहुन्छ। साथै, तपाईं विभिन्न जटिलताहरूको मानव कार्यहरू अनुकरण गर्न यो कार्यक्रमलाई प्रशिक्षण दिन सक्नुहुन्छ।
4. किमोनो: ( 16)
केमोनो स्क्रैपिंग न्यूफिड र मूल्यहरु संग काम गर्दछ .यो एचटीएमएल दस्तावेजहरु देखि पाठ निकालन को लागि एक सटीक र उन्नत उपकरण हो। सामान्यतया, किमोनो विभिन्न डेटा रूपहरु लाई खींच सकते हो।
5. पर्दा स्क्रेपर:
स्क्रिन स्क्रैपर अर्को उपयोगी डेटा निकासी उपकरण हो। यसले सफा र सफ्ट डाटा प्रदान गर्दछ र डाटा व्यवस्थासँग सम्बन्धित कठिनाइहरूको सामना गर्न सक्छ। तथापि, यो प्रोग्रामिङ क्षमतालाई सजिलै चल्ने हुन आवश्यक छ। साथै, यो उपकरण एक सानो pricey, र यसको नि: शुल्क संस्करण विकल्प र सुविधाहरु को सीमित संख्या संग हुन्छ।
6. स्क्रैप :
स्क्रैप एक सबैभन्दा शक्तिशाली, उच्च-अन्त्य र अद्भुत वेब क्रलिंग र डाटा निकासी ढाँचामा छ। यो धेरै साइटहरू क्रल गर्न प्रयोग गरिन्छ र तपाईंको आवश्यकता अनुसार संरचित र असंगत डेटा दुवै निकाल्न सक्दछ। यसले मनिटर मद्दत गर्दछ र डेटा गुणस्तरलाई स्वचालित बनाउँछ, यो सुनिश्चित गर्नका लागि तपाईंले आफ्नो अनलाइन व्यापारको लागि उत्तम नतिजा प्राप्त गर्नुहुनेछ।
7. स्क्रैपर विकी:
अन्य समान कार्यक्रमहरू जस्तै, स्क्रैपर विकिपीडिया धेरै विकल्पहरूसँग आउँछ। तपाईंलाई यो कार्यक्रमबाट उत्तम परिणामहरू प्राप्त गर्न कुनै कोडिङ कुञ्जीहरू आवश्यक पर्दैन। तपाईं न केवल सामान्य वेब पेजहरु बल्कि स्क्रैपर विकी को उपयोग गरेर पुरा विकिपीडिया पनि निकाल सकते हो। यो PHP, पाइजोन र रूबी को लागि समर्थन छ।
आशा छ कि तपाईले यो सूचीमा केहि लायक भेट्टाएका छौं, र हामी तपाईलाई यी ठुलो उपकरणहरू साथीहरुलाई साथ साझा गर्न सुझाव दिन्छौं।